हिरो बन्ने रहर – Rajdhani Daily
मंगलवार ४ मंसिर, २०७५ (Tuesday, 20th November 2018)
४ मंसिर, २०७५ (20 November 2018)
हिरो बन्ने रहर
अचेल हाम्रो मन एक्सन फिल्मले तानेको छ । हामी प्रायः एक्सन फिल्म हेथ्र्यौं, कहिलेकाहीँ कार्टुन पनि । एक्सन फिल्ममा झैं एक्टिङ गर्न खुब मन लाग्थ्यो, घरिघरि गथ्र्यौं । ममीड्याडीको आँखामा छारो हालेर हामीले विभिन्न फाइटको अभ्यासमा समय बिताउन थालेका थियौं ।एकदिन स्कुल जान खान खाएपछि म स्कुल ड्रेस लगाउँदै थिएँ । दाइले मलाई पछाडिबाट एक लात हान्नुभयो । म एकछिन रन्थनिएँ । त्यसपछि म दाइसँग कुस्ती खेल्न तम्सिएँ । केही बेरपछि हामी हिरो र गुन्डाको भूमिकामा प्रस्तुत भयौं । मैले ताकीताकी दाइलाई एक किक हानेको थिएँ, थर्मसलाई लागेछ । थर्मस फुटिहाल्यो ।
ममीले हाम्रो बदमासी थाहा पाइहाल्नुभएछ । दुईचार दिनसम्म नबिर्सिने गरी ममीको हातको चिउरा खायौं । दुःखको कुरा हामीले टिभी हेर्न पाएनौं, त्यस दिनदेखि । हाम्रो मन भित्रभित्रै रोयो, कसैले देखेन ! एक हप्तापछि तरकारी काट्न सघाएर हामीले ममीलाई फकायौं । राम्राराम्रा काम ग¥यौं, ममीड्याडीको मन पगाल्न । केही दिनमै हामी सफल भयौं । हामीले टिभी हेर्न त पायौं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम मात्र, त्यो पनि उहाँहरूको उपस्थितिमा । हामी रोयौं । तर, पनि ममीड्याडीको मन पग्लिएन ।
फुर्सद हुनेबित्तिकै दाइ र म हिरो–गुन्डाको खेल खेल्थ्यौं लुकीलुकी । हामीले स्कुलमा पनि यो खेल सुरु गरेका थियौं । सरमिसले थाहा पाउनुभएको थिएन । हाम्रो समूहमा अरू पाँचजना थपिएका थिए । हामी ससाना फिल्म बनाउँथ्यौं र दाजुभाइ पालैपालो फिल्मको निर्देशन गथ्र्यौं ।एक दिन मेरो निर्देशनमा म आफैं हिरोको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए, अरूचाहिँ गुन्डाको । तिनीहरूले मलाई पिटे, रगत पनि बग्यो मेरो नाकबाट । त्यस दिन मैले साँच्चिकै फिल्ममा झैं गुन्डाहरूलाई पिट्न सकिनँ, तैपनि मेरो मनमा हिम्मत र आशा जीवितै थियो ।
दण्ड पाइने डरले मनमा पीडा भए पनि मैले घटनालाई गोप्य राख्ने खुब प्रयत्न गरें । मेरो नाकमा रगत देखेर कसैकसैले शंका गरे । मैले लडेर रगत बगेको भनेर सबैलाई झुक्याएँ । तिनीहरूले पत्याएँ ।पूर्वयोजनाअनुसार हामी ११ बजेतिर संयुक्त पाटन क्याम्पसको चउरमा भेला भयौं । सबैको हातमा लौरो थियो । तर, मेरो हातमा केही थिएन, किनकि म हिरोको भूमिकामा थिएँ । फिल्मको कथानकअनुसार फाइट खेल्दै जाँदा म एकजनाबाट लट्ठी खोस्न सफल भएँ । मैले सबैलाई पिटिदिएँ । फिल्ममा झैं उनीहरूको घाँटी बटारिदिएँ, छातीमा लात पनि बजारें । तर, कोही पनि फिल्ममा झैं मरेनन्, घाइतेचाहिँ भए । क्या मज्जा आयो †
प्रत्येक फिल्मी कार्यक्रममा म कसैको हात भाँचिदिन्थें त कसैलाई गम्भीर घाइते बनाइदिन्थें । तैपनि, साथीहरू केही दिनमै तंग्रिएर मसँग फाइट खेल्न आउँथें । कुनै दिन त ममाथि रिस फेरिहाल्थे । म सहन्थें । बाहिरै देखिने चोट लागेमा अनेकौं बहाना पार्थें । सुरुसुरुमा त ममीड्याडीले पत्याउनुहुन्थ्यो मेरो कुरा, पछिपछि त पत्याउनुभएन । साथीहरूका ममीड्याडीले मलाई बाटोमा भेट्दा कराउँथे, तर्साउँथें । तर, म डराउँदिनथें । कारण हो, म चर्चित हिरो भइसकेको थिएँ ।
घाइते साथीका ममीड्याडी मेरै घरमा कयौंपटक बैठक बस्न आएका थिए । सबैजना मलाई हिरो बन्न रोक्थें । मलाई ज्यादै रिस उठ्थ्यो । ड्याडीले छडी लगाउन्जेल मात्र म हिरो बन्दिनँ भन्थें । पछि त हिरो बन्न मन लागेर आइहाल्थ्यो । अनि, म असल हिरो बन्ने प्रयत्न गरिरहन्थें, अरूलाई छलीछली ।
अचानक मलाई स्कुलले रेस्टिकेट गरिदियो । म जहाँ रहे पनि आप्mनो लक्ष्य पूरा गर्न सक्थें, मलाई खासै प्रभाव पारेन, स्कुलको निर्णयले । तर, ममीड्याडी रुनुभयो, म त रोइनँ ।
आज बिहानको कुरा । म छतमा घाम तापिरहेको थिएँ । ममीड्याडी अस्पताल जानुभएको थियो । दाइचाहिँ तल कोठामा पढिरहनुभएको थियो । अकस्मात् दाइ मनेर आउनुभएछ । उहाँले मलाई कोट्याउनुभयो । मैले वास्तै गरिनँ । फेरि कोट्याउनुभयो । म बोलिनँ ।
केही बेरपछि त उहाँले मेरो कानमा के घुसार्नुभएछ, म तर्सिएँ । उहाँ हाँस्नुभयो । मलाई रिस उठ्यो । मैले उहाँलाई एक लात हानें, अझै रिस शान्त भएन । फेरि एक लात हान्न लागेको थिएँ, हातले छेक्दै भन्नुभयो, ‘तिमी र म फाइट खेलौं ।’‘नाइँ, नखेल्ने ।’ फाइटप्रति वितृष्णा जागेर आयो ।‘खेलौं न, एकछिन भए पनि ।’ उहाँको स्वरमा मधुरताको आभास पाएँ ।
‘नखेल्ने † मजस्तो बदमाससँग किन खेल्न आउनुहुन्छ ? उता जानुस् ।’ मेरो स्वर आकासियो ।‘कसले भन्यो, तिमी बदमास ? तिमी त भविष्यको सुपरहिट हिरो पो त । भाइ, आज एकछिन फाइट खेलौं न । तिमी हिरो म गुन्डा है ?’ दाइले काम बाँडफाँड गरिहाल्नुभयो ।
दाइले मलाई हिरो भनेर सम्बोधन गर्नुभएकाले भित्र कताकताबाट हिरो बन्ने इच्छा फेरि जागेर आयो । त्यसपछि मैले भनें, ‘ल, सुुरु गरिहालौं ।’ हाम्रो फाइट सुरु भयो । हामी दुवैको अनुहार उज्यालिँदै गयो । दाइले उडीउडी अनेकौं किक देखाउनुभयो । तर, मलाई लाग्दै लागेन । यसक्रममा म कौसीको छेउमा पुगें ।
उहाँले मलाई ताकेर फेरि लात हान्नुभयो । मैले फेरि छकाएँ । उहाँको खुट्टा चाहिँ हुक्कामाथि अल्झिएछ । यही बेला मैले उहाँलाई एक लात हानेर धकेलेको थिएँ । उहाँ त छतबाट खस्नुभयो । मैले हेर्दाहेर्दै मूल सडकमा पछारिनुभयो । मेरो होसहवास नै उडेर गयो । त्यसपछि के भयो, म आफैंलाई थाहा छैन ।
होसमा आउँदा म अस्पतालमा रहेछु । मेरो वरिपरि आफन्त र प्रहरी पनि रहेछन् । केही दिनपछि प्रहरीले मलाई अस्पतालबाट बाहिर लैजान लागे । यसै बेला गहभरि आँसु पारेर आमाले मलाई प्रश्न गर्नुभयो,
‘तिमीलाई दाइको माया लाग्दैन ?’‘लाग्छ । उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ?’ मैले बल्लतल्ल स्वर निकालें ।‘यहीँ छ ।’ आमा आँसु पुछ्न थाल्नुभयो । ‘त्यस भयो भेट्न गइहालौं न ममी ।’ म हतारिएँ । मैले दाइ रुन्चे अनुहार बनाएर बेडमा सुतिरहेको देखेें । उहाँको शिरदेखि खुट्टासम्म हेरें । मेरो नजर दाइको हात र खुट्टामा बाँधिएको प्लास्टरमा अडियो । अनि, आमालाई धक्का दिँदै दाइको हात समाउन पुगें । त्यसपछि दाइको छातीमा घोप्टिएर निकै बेरसम्म क्वाँक्वाँ रुन थालें ।
सामान्य ज्ञान (लोकसेवा टिप्स)
सामान्य ज्ञान विश्वको भूगोल १. टापुहरूको महादेश भनेर चिनिने महादेश कुन हो ? क. अस्ट्रेलिया ख. युरोप ग. एसिया घ. अफ्रिका २. उत्तर अमेरिका महादेशमा पाइने घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ ? क. पम्पाज ख. प...
संघीय शासन प्रणाली केही महत्वपूर्ण जानकारी (लोकसेवा टिप्स)
संघीय शासन प्रणाली केही महत्वपूर्ण जानकारी राज्यशक्तिको प्रयोग दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट हुने प्रणाली, सरकारका तहबीच सार्वभौमसत्ताको विभाजित प्रयोग हुने हुँदा स्वशासन र साझेदारी शासनको संयोजन ह...
माथिल्लो तामाकोसीको कार्यप्रगतिमा ऊर्जामन्त्रीको चासो
बेनी–जोमसोम सडक दैनिक आठ घण्टा बन्द
जडिबुटीबाट रिभल्बर र लागुऔषधसहित दुई पक्राउ
पोखरामा पुसमा सातौं लिटरेचर फेस्टिभल
अमेरिकामा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा चिकित्सक र प्रहरी अधिकृतसहित चारजनाको मृत्यु
म्याग्दी, ४ मङ्सिर । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्न
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे ...
पुत्र प्रकाशको सम्झनामा भक्कान...
एनजीओलाई एक वर्षमा २० अर्ब, खर...
काठमाडौं। सातौं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल (साहित्य सम्मेलन)–२
शक्ति बल्लभलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड
काठमाडौं। विन्ध्यवासिनी फाउन्डेसनले १ लाख रुपैयाँसहितको यो